१० नगरपालिकाको परिणाम घोषणा हुन बाँकी
७५३ स्थानीय तहमध्ये १० वटाको मात्रै अन्तिम परिणाम घोषणा हुन बाँकी छ।
ललितपुर महानगरको मेयरमा कांग्रेस र उपमेयरमा एमाले विजयी, कसले कति मत पाए?
ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका छन्।
अधिकांश पुरानै वाचाको निरन्तरता अधिकांश पुरानै घोषणा, वाचा र योजना दोहोर्‍याउँदै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
एक सातामै दोस्रो पटक बढ्यो गाडी भाडा, कहाँको भाडा कति पुग्यो? सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा फेरि बढाएको छ। एक साताको अन्तरालमै दोस्रो पटक भाडा वृद्धि गरिएको हो।
धनगढीका मेयरको निर्णयः ७० वर्ष माथिकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण धनगढी उपमहानगरका ७० वर्षभन्दा माथिका स्थायीवासी नागरिकको ओपीडी जाँच नि:शुल्क हुने भएको छ।
उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकता उत्पादन वृद्धिलाई केन्द्रमा राख्न खोजेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको संवाहकका रूपमा अघि सारिने र कृषकलाई संरक्षण गरिने उल्लेख गरेको छ।
यस्तो छ राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संसद्‌‌मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ) राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको करमा छूट दिएर मूल्य घटाऊ: राप्रपा नेपाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको करमा छूट दिएर भए पनि मूल्य घटाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका दुई जना डीआईजीको बढुवासँगै विभिन्न १३ निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय सभाकी सांसद विमला राई पौड्यालले नाबालिग बलात्कार सम्बन्धी अपराधमा हदम्यादको प्रावधान हटाउनुपर्ने बताएकी छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयरका उम्मेदवार रामेश्वर श्रेष्ठले रूख र कलम चिह्न दुवैमा खसेको मत आफूले पाउनुपर्ने माग सहित निवेदन दिएका छन्।
काठमाडौंको उपमेयरमा एमाले उम्मेदवारलाई ३० हजार मतको अग्रता काठमाडौं महानगरपालिकाको उपमेयरमा नेकपा (एमाले) बाट उम्मेदवारी दिएकी सुनिता डंगोलले ३० हजारभन्दा बढी मतले अग्रता लिएकी छन्।
वीरगञ्जमा ८ हजार मतले पछि परे विजय सरावगी वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर विजय सरावगी आठ हजारभन्दा बढी मतले पछाडि परेका छन्।
पोखरामा सवा लाख मतगणना, कसको कति? पोखरा महानगरपालिकामा सवा लाख मतगणना हुँदा गठबन्धनका उम्मेदवारले अग्रता कायमै राखेका छन्।
देशभर ३३ हजार ८५८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित, कुन प्रदेशमा कति? स्थानीय तह चुनावबाट अहिलेसम्म देशभर ३३ हजार ८५८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
स्थानीय तह चुनावः प्रदेश १ मा एमाले‚ बाँकीमा कांग्रेस पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनको अन्तिम नतीजा आउने क्रम जारी छ। आइतबार साँझसम्म आएको परिणाम अनुसार‚ प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा धेरै पदमा विजयी भएको छ।
तिलोत्तमाको मेयरमा गृहमन्त्री खाँणका भाइको अग्रता रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको मेयरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका भाइ रामकृष्ण खाँणले अग्रता कायमै राखेका छन्।
भरतपुरमा २१ हजार ६१४ मत गन्न बाँकी‚ रेणु दाहाल करीब १० हजार मतले अघि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा पाँच दलीय गठबन्धनकी उम्मेदवार रेणु दाहालले करीब १० हजार मतले अग्रता लिएकी छन्।
पोखरामा एक लाख १९ हजार मतगणना‚ कसको कति मत? कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा सत्ता गठबन्धन र उपमेयरमा नेकपा (एमाले) का उम्मेदवारले अग्रता कायमै राखेका छन्।